TERKINI: Maaf Bukan Tan Sri Abdul Hamid Pawanteh, Tetapi ....
Tan Sri Abd Hamid Pawanteh Sertai PAS Selepas Muhammad Taib?
Five Signs You May Get Cancer
ဗုဒ္ဓ၏ မေတ္တာဝါဒကို စွန့်ပယ်မည်ဆိုပါမူ အမျိုးပျောက်ရုံတင်မက ဘုံပျောက်မှာပင်
Najib rewards Perkasa veep, Zulkifli Noordin for pissing on the Indians
Will BN’s money-train deliver the results in GE-13? By J. D. Lovrenciear
Girls’ Generation Beep Beep music video
Dua Tan Sri Sertai PAS, Rahmat Di sebalik Isu Video Seks
DEMOCRACY VS MOBOCRACY
Kit Siang 'takut'!
Radio Australia Speaks To Merdeka Centre For Opinion Research On GE13
The Letter *joke*
15 April 2013: Surat Aduan Kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur berkenaan percubaan untuk mencabut 16,000 bendera pelbagai warna di bulatan Taman Lucky, Bangsar
Posted: 16 Apr 2013 11:01 AM PDT
Laporan GB sebelum ini menyatakan Tan Sri Abdul Hamid Pawanteh menyertai PAS rupanya tidak benar.
Walaupun terkaan GB mengenai "ciri" hirarki tertinggi di parlimen seperti yang disebut oleh Naib Presiden PAS, Salehuddin Ayub itu benar iaitu bekas Speaker Dewan Negara, tetapi orangnya tersilap.
Hasil siasatan GB, rupa-rupanya laporan akhbar yang menyatakan orang berkenaan adalah bekas MB dari utara itu adalah tidak betul.
Dan setelah membuat beberapa penyelidikan lanjut, sebenarnya orang yang dimaksudkan itu ialah Tan Sri Adam Kadir.
Beliau merupakan presiden pertama Pertubuhan Mantan Wakil Rakyat UMNO (Pakku) yang ditubuhkan pada Mac 2010. Beliau merupakan bekas Yang Dipertua Dewan Negara (13 Jun 1995 - 30 November 1996) .
Adam Kadir menerima ijazah Undang-Undang Perdagangan dan Korporat dari Universiti London.
Beliau pernah dilantik sebagai seorang Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dalam Kumpulan Pernas, Ahli Dewan Rakyat, Setiausaha Parlimen dan sebelum itu sebagai pegawai di Bank Negara dan akhirnya mencapai kemuncak sebagai Yang Dipertua Dewan Negara.
Beliau juga menjadi ahli Jawatankuasa Disiplin UMNO yang dipengerusikan oleh Tengku Ahmad Rithauddeen Tengku Ismail.
GB lebih yakin jawapan kali ini adalah betul.
Apa-apa hal pun kita tunggu nanti 22 April ini untuk pengesahan penyertaannya ke dalam PAS seperti yang disebutkan sebelum ini:
Kedua-dua Tan Sri ini akan menyerahkan borang keahlian pada 22 April depan secara serentak, dua hari selepas penamaan calon. Menurutnya, satu sidang media khas akan diadakan memandangkan kedua-dua Tan Sri tersebut akan turut turun padang membantu PR dalam kempen Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU13). "Kami menerima dengan tangan terbuka. Penyerahan borang akan diserahkan di sini (di pejabat Pas Pusat). "Tetapi, pengumuman besar-besaran akan dibuat di Shah Alam (Selangor) pada sebelah malamnya, iaitu semasa ceramah Pas di sana," katanya kepada Sinar Harian di pejabat Pas Pusat, di sini, semalam.
Kepada semua GB meminta maaf di atas kesilapan tersebut yang berpunca dari kesilapan laporan akhbar terbabit dan maaf juga kepada Tan Sri Abdul Hamid Pawanteh.
Kepada Tan Sri Muhammad Taib dan Tan Sri Adam Kadir, kami menga-alukan penyertan Tan Sri-Tan Sri berdua bersama-sama rakyat di dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan.
Posted: 16 Apr 2013 09:00 AM PDT
Posted: 16 Apr 2013 09:36 AM PDT
Penyertaan bekas Menteri Besar Selangor, Tan Sri Muhammad Taib ke dalam PAS sudah pun diketahui umum dan hanya menunggu penguman rasmi dari parti. Persoalan kini, siapa lagi seorang Tan Sri yang dinyatakan oleh Naib Presiden PAS yang turut sama telah mengisi borang menyertai PAS?
Salehuddin telah pun memberikan klunya lebh kurang begini:
"Seorang daripada mereka adalah bekas pegawai kerajaan yang mempunyai kaitan dengan Parlimen Malaysia. Orang ini menduduki hierarki tertinggi dalam pentadbiran Parlimen."
Di dalam satu laporan lain Salehuddin menyatakan:
Naib Presiden Pas, Salahuddin Ayub mengesahkan seorang bekas menteri besar - dari utara Semenanjung, akan menyertai parti itu dalam masa terdekat ini.
Sekarang mudah untuk mendapat tahu jawapannya.
Siapakah bekas Menteri Besar dari negeri sebelah utara yang ada Tan Sri?
Ada dua orang, Pertama Tan Sri Ramli Ngah Talib, bekas MB Perak dan kedua, Tan Sri Abdul Hamid Pawanteh, bekas MB Perlis.
Apabila melihat pula kenyataan Salehuddin bahawa beliau menduduki hirarki tertinggi di dalam pentadbiran parlimen, maka jawapan yang jelas ialah yang kedua itu, iaitu Tan Sri Abdul Hamid Pawanteh.
Meskipun Tan Sri Ramli Ngah Talib pernah menjadi Speaker Dewan Rakyat, tetapi apabila dinyatakan hirarki tertinggi di parlimen, maka sya lebih cenderung untuk menjangkakan Tan Sri Abdul Hamid kerana Berikut ialah petikan biografi Tan Sri Abdul Hamid Pawanteh yang dipetik dari laman wikipedia:
1986 beliau menang bertanding dalam Pilihan raya umum Malaysia 1986 .Pada Ogos 1986 Perdana Menteri Malaysia ketika itu,Tun Dr Mahathir Mohamad melantik beliau menjadi Menteri Besar Perlis. Kemudian beliau diganti oleh Dato' Seri Shahidan Kassim (1995-2008)
Beliau menjadi menjadi Yang Dipertua Dewan Negara sejak7Julai 2003 dan disambung lagi pada 19 Julai 2006 untuk penggal kedua. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mengemukakan cadangan itu dan disokong oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk M. Kayveas dan disokong oleh Senator Datuk Abdul Rahman Suliman, di Dewan Negara.
Pada6Julai 2009, beliau menamatkan perkhidmatan sebagai Yang Dipertua Dewan Negara.Tempat beliau akan diambil alih timbalannya, Wong Foon Meng, 55, yang juga Setiausaha Agung MCA mulai7Julai 2009.
Menurut Salehuddin lagi:
Kedua-dua Tan Sri ini akan menyerahkan borang keahlian pada 22 April depan secara serentak, dua hari selepas penamaan calon.
"Kami menerima dengan tangan terbuka. Penyerahan borang akan diserahkan di sini (di pejabat Pas Pusat).
"Tetapi, pengumuman besar-besaran akan dibuat di Shah Alam (Selangor) pada sebelah malamnya, iaitu semasa ceramah Pas di sana," katanya kepada Sinar Harian di pejabat Pas Pusat, di sini, semalam.
Kepada kedua-dua bekas MB tersebut, kita mengalu-alukan penyertaan mereka ke dalam PAS dengan ucapan ahlan wa sahlan dan kita berdoa agar tuan-tuan berdua dikurniakan kekuatan serta istiqamah untuk terus bersama di dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan!
Posted: 16 Apr 2013 05:37 AM PDT
A Washington woman got quiteasurprise when Facebook's "People You May Know" feature reportedly recommendedapotential contact. The two women certainly had something in common:ahusband.
The woman's identity has remained anonymous, so we will call her Wife 1. She was perusing the popular social networking site when she says she saw the other woman, who we will call Wife 2, suggested by Facebook asaperson she may know.
She clicked on the woman's profile and saw photos of the woman standing next toawedding cake — along with Wife's 1 estranged husband. That's when Wife 1 did what any logical person would do: She called her mother-in-law.
Posted: 16 Apr 2013 05:41 AM PDT
"You have cancer" are three words you never want to hear . . .
America's foremost holistic health practitioner, David Brownstein, M.D., has spent much of his medical career studying cancer, and learning the best ways to avoid becoming its victim.
Because the only big winner in the cancer treatment story to date has been the cancer industry's multibillion-dollar profits, Dr. Brownstein has just releasedacomplimentary video documentary revealing some of his startling findings.
In this video, you'll discover five specific signs that you will be diagnosed with cancer during your lifetime.
More important, you'll see:
According to Dr. Brownstein, nearly all of us have cancer cells in our bodies at various times during our lives. The trick is to avoid letting those cells multiply and overwhelm the body's natural defenses.
CLICK HERE for the rest of the post and to watch the video.
Posted: 16 Apr 2013 07:24 AM PDT
Demikianlah hukum kebenaran dan keadilan. Anda permainkan PAS setelah PAS memberikan anda ruang dan peluang untuk bertanding di atas tiketnya pada 2008. Kini anda pula dipermainkan BN sekalipun anda telah mengampu begitu hebat, lebih dari orang lain.
Nak bertanding Bebas? Silakanlah tapi UMNO BN akan tetap mengundi calon mereka, dan akan terus ketepikan Pak Him....
Posted: 16 Apr 2013 04:24 AM PDT
၁၉၉၃ခုနှစ်က ရရှိခဲ့သော စာတမ်း၏ ဒုတိယပိုင်း…..by Maungmaung Skw (Notes) on Saturday, July 28, 2012
တရုပ်ရဟန်းကြီး ဖါတီယန်၊ အင်စင်နှင့် ဟိယန်ဆင်တို့၏ မှတ်တမ်းများအရ ဗုဒ္ဓသာသနာ သည် ကျယ်ပြန့်ခိုင်မာမှု မရှိတော့ဘဲ၊ အိန္ဒိယအလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့ဘက် ဘင်္ဂလားနယ်တောင်ဘက် ကုန်းမြင့်တ၀ိုက်၌သာ ကြိုကြား၊ ကြိုကြား ကျန်ရှိတော့ကြောင်း ဆိုထား သည်။
၃. ခရစ်သက္ကရာဇ် ၃ ရာစုအတွင်းက ကသ္မီရနယ်ရှင် ဟန်မင်းဆက်မှ ဟိန္ဒူဘုရင် မဟိရကုလသည် ယနေ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင်း ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားသော ဂန္ဓာရတိုင်းကိုမွှေနှောက် ချေမှုန်းခဲ့ရာ၌ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ အများအပြားကို သုတ်သင်ခဲ့သည်။ (ဤအချက်များသည် သမိုင်း၏ ဖျောက်ဖျက်၍ မရနိုင်သော အမှန်တရားများဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အရှေ့တိုင်း ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာပေစဉ်များတွင်လည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်)
မူဆလင်တမန်တော် မိုဟာမက်သည် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၅၇၁ တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဒဘာသာ သည် မိုဟာမက်မမွေးခင်ကပင် ပျောက်ပျက်နေပြီးဖြစ်သည်။ မိုဟာမက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကာလလောက်တွင် အီစလံ ဘာသာသည် အိန္ဒိယသို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၂ ရာစုအတွင်း အိန္ဒိယတွင် ၀င်ရောက် မွှေနှောက်သော အာဖဂန် မူဆလင်တို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အိန္ဒိယနိုင်မှပျောက်ကွယ်ရသည်ဟု ဟိန္ဒူသမိုင်းပညာရှင်တို့က ဆိုကြသည်။ ဖော်ပြပါ အာဖဂန် စစ်သွေးကြွများသည် မူလက ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်ပြီး၊ အီစလံဘာသာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိမြင်နားလည်သူမဟုတ်ပါ။ အစဦးပိုင်းတွင် အိန္ဒိယသို့ရောက်ခဲ့သော အာရဗ် တို့ကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲသားတို့ ၀မ်းမြောက်ခဲ့ရသည်။ အာရဗ်မူစလင်တို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲသားများ၊ ဇာတ်နိမ့်များ၊ လယ်ကျွန်များ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အာရဗ်တုိ့ပြန်သွားပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်မှအာဖဂန်တို့ က အိန္ဒိယသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အိန္ဒိယတိုက်နယ်သို့ ၀င်ရောက်လာသောအခါ မည်သည့်ဘာသာ၊ မည်သည့်လူမျိုး ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ သူခိုးဓါးပြ ခဲ့သို့ အားလုံးကို ပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟု မူစလင်သမိုင်းပညာရှင်တို့က ၀န်ခံထားကြပါသည်။
မူစလင် သမိုင်းပညာရှင်များ၏ ဖော်ပြ ချက်အရ အိန္ဒိယတွင် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော မူစလင် ဘုရင်များသည် အီစလံ ဘာသာကို မည်သို့မျှ ကူညီဖြန့်ချီပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ အီစလံဘာသာကို သာသနာပြုခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ ဆူဖီးခေါ် မူဆလင် ရသေ့ဘာဘာကြီးများသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ထိုမူစလင်သမိုင်းပညာရှင်တို့က ကျွန်တော်အား " ဒီလိုပြောကြကြေးဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ကကော ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ စေတီပုထိုးများကို ဖျက်စီးခဲ့တာ၊ ဘာကြောင့်လဲ " ဟု ပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလောင်းဘုရားလက်ထက် ဗမာတို့ ဖျက်စီးခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းကန်များကို ထိုင်းလူမျိုးတို့သည် ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ ဗမာတို့၏ လက်ချက်ဟု ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို ပြသနေဆဲဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အီစလံဘာသာဝင်များကို အထူးအရေးပေးခြင်းခံနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ဘက်ရှိ ပတ္တာနီ၊ နရသီဝ၊ ရ၀လဟူ၍ ပြည်နယ်သုံးခုတွင် မူစလင်များ အများစု၇ှိသည်။ ထိုင်းဘုရင်သည် မူစလင်တို့၏ ဘာသာရေး ဂိုဏ်းချုပ်ကို တိုက်ရိုက်ခန့်ပေးသည်။ ဂိုဏ်းချုပ်သည် အာဏာအပြည့်အ၀ရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ၀န်ကြီးကက်ဘိနက်တွင် ၀န်ကြီး ၃-၄ ဦးမှာ အစဉ်အမြဲ မူစလင်ကို ခန့်လေ့ရှိသည်။
အာရဗ်နိုင်ငံများ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံအကျိုးရှိနေသည်။ မူစလင်တို့၏ ဘာသာရေးတက္ကသိုလ်မှာ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ခမ်းနားစွာရှိနေသည်။ ဤကဲ့သို့ပင် ကမ္ဗောဒီးယားတွင်လည်း မွစ်လင်မ်များကို အရေးပေးခြင်းခံရသည်။ ကွန်မြူနစ်ပိုပေါ့ လက်ထက်တုန်းက မွစ်လင်မ်များ သိန်းနှင့်ချီ၍ အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းအကြောင်းကို နောင်တတ်လာသည့် အစိုးရက ကမ္ဘာသိအောင် ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ဤနှစ်နိုင်ငံလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာလူများ ရှိသော နိုင်ငံများဖြစ်သည်။
ယင်းနှစ်နိုင်ငံထက် ပိုမို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ နိုင်ငံကား သီဟိုဠ်ကျွန်း သီရိလင်္ကာပင်ဖြစ်သည်။ သီရိလင်္ကာတွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ဆင်ဟာလီစ်တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယပြည်တောင်ပိုင်းမှလာရောက်ကြသူ တမိလ်များသည် ဟိန္ဒူများ ဖြစ်ကြသည်။ တမိလ်တို့သည် ၃၀% မျှရှိသည်။ နောက်ထပ်အစုတစုက မွစ်လင်မ်များဖြစ်ကြသည်။ ၁၆%မျှရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အုပ်ချုပ်သူနှင့် တမိလ်ဟိန္ဒူတို့စပ်ကြား စစ်ဖြစ်နေသည်မျာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ တမိလ်ဟိန္ဒူအဖွဲ့က တမိလ်ကျားအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဆင်ဟာလိစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကို ခေါင်းဆောင်မှုပေးသော ရဟန်းတော်များကို စက်ဆုတ်မှုရှိကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ အကြိမ်ပေါင်းများစွာအထိ ရဟန်းတော်များကို ဓါးများဖြင့် ကိစ္စတုံးပစ်ခဲ့သည့် သာဓကရှိသလို၊ သီဟိုရှိ စွယ်တော်မြတ်စေတီကိုပင်လျှင် ဗုံးဖြင့် ဖေါက်ခဲ့သည်။ သီရိလင်္ကာရှိ မူစလင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် မဟာမိတ်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်အတူ မူစလင်များမှာလည်း တမိလ်ကျားသူပုန်တို့၏ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို အလူးအလဲခံနေရရှာသည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသည် မူစလင်နိုင်ငံများနှင့် အလွန်ရင်းနှီးမှုရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထိုမျှမက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို မူစလင်နိုင်ငံအများအပြားက ကူညီထောက်ပံ့လျှက်ရှိနေသည်။ ဤဖော်ပြချက်သည် မျက်မှောက်ခေတ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာများ၏ ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာအဆင့်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာပြုအဖွဲကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ယင်းကို ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့က ဦးစီးခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့တွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားသောနိုင်ငံများတွင် ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံများသည် ကြီးမားသော အနေအထားဖြင့် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြသည်။ ယင်းနိုင်ငံများသည် မူစလင်ဘာသာဝင် အများစုရှိသော နိုင်ငံများ ဖြစ်သည်ကို သတိပြုပါ။ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားရှိ ဗုဒ္ဓသာသနိက အဆောက်အအုံများကို အစိုးရက ဦးစီး၍ ကျကျနန ပြင်ဆင် မွမ်းမံပေးသည်။ အင်ဒိုနီးရှားရှိ ဗောရောဗုဒ္ဓောဘုရားကြီးကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ယူနက်စကို အကူအညီဖြင့် IBM ကွန်ပျူတာစံနစ်ကို အသုံးပြုကာ ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ သူတို့နိုင်ငံတွင် ဥပုသ်နေ့တွင် ရုပ်သံလွှင့်ဂြိုဟ်တုမှနေ၍ ဘုန်းတော်ကြီးများ ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ဟောကြားသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရောက် သာသနာပြုခွင့်ပေးထားသည်။ နောက်ထပ်အကောင်းဆုံး နမူနာအဖြစ် စင်ကာပူနိုင်ငံကို လေ့လာစေလိုပါသည်။ ယင်းနိုင်ငံသည် ခရစ်ယံ၊ မူစလင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ရှင်တို၊ ပျူ၊ ဟိန္ဒူ၊ ဆစ်ခ် ဟူ၍ ဘာသာပေါင်းစုံ နေထိုင်သော သေးငယ်လှသော ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာဝင်အားလုံး၊ လူမျိုးအားလုံးသည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အထူးလေးစားစွာ ဆက်ဆံကြသည်။ သူတို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်သည်ကား သူတို့နိုင်ငံတိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်းသာလျှင် ဖြစ်သည်။ ယင်းနိုင်ငံရှိ တရုပ်၊ ကုလား၊ မလေး၊ စသည်ဖြင့် လူမျိုးအားလုံးသည် မိမိတို့ကိုယ်ကို "ဆင်ဂျာပူရီယန်" ဟု၍ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် မလေးလူမျိုးအများစုနေထိုင်ရာ မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှားစပ်ကြားတွင် ဂုဏ်ရှိစွာ နေထိုင်နိုင်ရခြင်းမှာ နိုင်ငံချစ်စိတ်ဓါတ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ အာရဗ်နိုင်ငံများတွင် မူစလင်များအပြင် ခရစ်ယံများ၊ ဂျူးများ၊ ဟိန္ဒူများလည်း နေထိုင်သည်။ အာရဗ်နိုင်ငံစုံတွင် ခရစ်ယံဦးရေ ၇ သန်းကျော်ရှိသည်။ ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အယူသည်းသောဘုရင်အုပ်ချုပ်သည့် ဆော်ဒီအာရေဗျမှလွဲ၍ ကျန်နိုင်ငံများတွင် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ ၄င်းဆော်ဒီတို့သည် သီးခြားဘာသာရေးဂိုဏ်းဖြစ်သော ၀ဟာဗိုက်များဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ အခြားမူစလင်များကို သူတို့နိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်လျှက် တင်းကြပ်စွာ စောင့်ကြည့်နေတတ်သည်။ အီဂျစ်ပြည်သား ဘူထရို့စ်ဂါလီ သည် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် ခရစ်ယံပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဇနီးဖြစ်သူသည် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ပင် အီရတ်နိုင်ငံတွင်လည်း ခရစ်ယံများသည် အရေးပါလှသော အစိုးရဌာနများကို အုပ်ချုပ်ရသည်။
ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လွတ်လပ်သော မူစလင်နိုင်ငံ ၅၄ နိုင်ငံရှိသည်။ သူတို့တွင် I.C.O ဟုခေါ်သော အဖွဲ့အစည်းရှိသည်။ ယင်းအဖွဲ့နှင့်ဆက်နွယ်သော အာဖရိကညီညွတ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ အာဆီယံအဖွဲ့ရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကုလသမဂ္ဂတွင် သူတုိ့၏ စုစုပေါင်းအင်အားမှာ ၁၀၀ ကျော်ရှိနေသည်။ သူတို့လိုချင်သော ပုံစံကို အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့် အပေးအယူ လုပ်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတစ်ခုခုတွင် မူစလင်လူနည်းစုတို့ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံရသည်ဟု သတင်းဖြစ်ပွားလျှင် ကုလသမဂ္ဂရုံးကြီးပင် တုန်လှုပ်သွားရအောင် သူတို့က လှုပ်ရှားလေ့ရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ကုလသမဂ္ဂမှကြီးမှူး၍ ဖွဲ့စည်းထားသော ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ မဟာမင်းကြီးရုံးက ရှိနေသည်။ ယင်းသည် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသအထိ ကွင်းဆင်းကာ ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းရုံမက အတော်ကြာသည်အထိ ယင်းဒေသတွင် ၀င်ရောက် စောင့်ကြပ်ပေးသည်။ ဥပမာ – ရိုဟင်ဂျာ၊ ဘော့စနီးယား ကိစ္စကို ကြည့်လော့။ ဤဖော်ပြပါ အချက်များသည် ကျွန်တော်တို့၏ ရိုးသားလှသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသိရှိစေရန် ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူများမြှောက်ပေးတိုင်း လိုက်ကလျှင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသာလျှင် ပြိုကွဲပျက်စီးရမည်မလွဲပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး သတိပြုရမည့် အချက်သည်ကား နိုင်ငံတော်တည်တံခိုင်မြဲပြီး အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး မပြုကွဲရေးပင်ဖြစ်သည်။
"မျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ရ" စာတမ်းတွင် အချို့သော အချက်အလက်များသည် မူစလင်ထုကို စိတ်ဓါတ် တက်ကြွရန်နှင့် နိုင်ငံရေးအရ အခွင့်အရေးတောင်းခံရန် တစ်ဖက်မှ လှုံ့ဆော်ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ဗြိတိသျှ အစိုးရလက်ထက်မှစ၍ ယနေ့အထိ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ထုတ်ပြတ်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အီစလံ ဘာသာဝင်တို့သည် ၃.၈% ရှိသည်ဟု သိရသော်လည်း "မျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ရ" စာတမ်းတွင်မူ အီစလံဘာသာဝင် ၂၀% ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ ၅၀%သို့ရောက်လာလျှင်
ဗုဒ္မဘာသာဝင်တို့ကို ဤနိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသကဲ့သို့ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်နယ်တွင် ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး၏ လူဦးရေ ၃ပုံ ၁ ပုံရှိကြောင်းနှင့် စစ်တွေမြို့တွင် ထက်ဝက်နီးပါးသည် မူစလင်များ ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။ တစ်ဖန် ရန်ကုန် – မန္တလေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိမြို့ကြီးများတွင် မူစလင်တို့ ထက်ဝက် သို့မဟုတ် ၃ ပုံ ၁ ပုံ နီးပါးရှိကြောင်းကိုလည်း ရေးသားထားသည်။ စာတမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဖက်မှ ရေးသလိုလိုနှင့် အခြားဘာသာဝင် တို့အားလည်း အသင်တို့အင်အားသည် မသေးငယ်လှ၊ နိုင်ငံရေးအရ ရပိုင်ခွင့်တောင်းခံကြဟု လှုံ့ဆော်ပေးသကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။ ရိုးသားပုံမရပါ။ နိုင်ငံရေးပယောဂ ပါနိုင်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သတိမူသင့်ပါသည်။ ဤဖော်ပြချက်များသည်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဟိန္ဒူအစွန်းထွက်တို့က ဖော်ပြသကဲ့သို့ သက္ကရာဇ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မူစလင်တို့သည် ဟိန္ဒူများကိုကျော်သွားလိမ့်မည်ဟု ရေးသားသည့် ပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေသည်။ အချို့ အချို့သော စာရင်းဇယားများသည် နိုင်ငံတော်၏ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်များဖြစ်၍ ပြင်ပသို့ ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမရှိပါ။ ယင်းအချက်ကို စာတမ်းပြုစုသူများတကယ်ပင် နားမလည်ကြခြင်းလော၊ သို့တည်းမဟုတ် နားမလည်ချင်ဟန်ဆောင်နေသလောဟုပင် စဉ်းစားစရာဖြစ်လာသည်။ နိုင်ငံရေးအနှောင့်အယှက် ပယောဂ မကင်းဟု ယူဆရမည်ပင်။
ဤကဲ့သို့ရေးသားချက် ထိုးနှက်ချက်များကြောင့်ပင် ယူဂိုစလပ်နိုင်ငံသည် ပြိုကွဲခဲ့ရသည်။ ဘော့စနီးယာနိုင်ငံ၊ ယခုတဖန် ကိုဆိုဗိုကို ခွဲထုတ်ရန် ကြိုးစားနေကြသည်။ ယူဂိုစလပ်နိုင်ငံပြိုကွဲခဲ့ရခြင်းမှာ ကျဉ်းမြောင်းသော အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့် ဆာဗ်တို့၏ မဟာလူမျိုးကြီး ၀ါဒကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဆိုသည်မှာ ယင်းနိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းနေထိုင်သူများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးပြည့်ဝမှုနှင့် ဆိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် မည်သည့်လူမျိုးကမှ အခြားလူမျိုးကို ကျွန်ပြု၍ မရနိုင်ပါ။ သို့ပါ၍ မေတ္တာဝါဒီ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပီပီ နောင်တော်ကြီးစိတ်ဓါတ်မွေးမြူကာ လူမျိုးစုညီငယ်လေးများကို သနားညှာတာသွားမည်ဆိုလျှင်မူ လူမျိုးစုငယ်များသည် အစ်ကိုကြီးနောက်သို့ တစ်ကောက်ကောက်လိုက်ပါသွားမည်မှာ မုချအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုရှိသော မူစလင်ကုလားများသည် ဗမာလူမျိုးကိုမှ ပိုပြီးအထင်ကြီးကြသည်။ သို့ဖြစ်၍လည်း ဗမာကဲ့သို့ ၀တ်စားနေထိုင်ခြင်းကို ဂုဏ်ယူကြသည်။ သူတို့ကို ကုလားခေါ်ခြင်းထက် မြန်မာမူစလင်ဟု ခေါ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ဗမာတို့ကဲ့သို့ တိုက်ပုံအင်္ကျီကို ၀တ်ဆင်ကြသည်။ ဗမာတို့ကဲ့သို့ သူတို့ဘာသာအမည် အီစွတ်၊ ကာဆင် နှင့်ဆက်ပြီး ကိုတင်မောင်၊ ကိုခင်အောင်ဟု ရေးသားခေါ်ဝေါ် ကြသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ယင်းသူတို့သည် ဗမာလူမျိုးတို့၏ နောက်ဆက်တွဲအင်အားဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်များတွင် နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ အစိုးရက သူတို့၏ ဦးရေကို ဗမာလူမျိုးစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြကြသည်။ မိမိတို့ခင်တွယ်သော သူတို့တွင် မကောင်းသော လက္ခဏာများ ရှိသလားဟု မေးစရာရှိသည်။ သူတို့သည် မူးယစ်ထုံထိုင်းစေသော အရက်သေစာများကို ရောင်းချခြင်းမရှိ၊ သူတို့သည် ဘိန်းဖြူကဲ့သို့ မကောင်းသောအလုပ်များကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခြင်းလည်းမရှိ။ စီးပွားရေးတွင် Monopoly ဟုခေါ်သည့် ထိပ်ပိုင်းမှ ချုပ်ကိုင်ခြင်းလည်းမရှိ၊ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးပြောကြသေးသည်။ ယနေ့ကာလတွင် ကုလားမများကို အခြားသူတို့ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးကောက်သကဲ့သို့ ဗမာအမျိုးသမီးများကိုလည်း ကုလားများက ယူကြသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းအိမ်ထောင်ရေးသည် ရေရှည်တည်တံ့ခြင်းမရှိကြောင်း နှစ်ဖက်လုံးက သိကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘာသာတူအချင်းချင်းသာ ယူကြရေးကို အထူးပြုနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ယနေ့ခေတ်ကာလသည် လွတ်လပ်ရေးရပြီး နှစ် ၅၀ ကျော်ကာလဖြစ်သည်။ ကုလားများသည်လည်း မူလကုလားတို့နှင့် မတူတော့၊ ဗမာလူမျိုးနှင့် မခြား စိတ်ဓါတ် နှင့် ရုပ်ရည် တူလာသည်။ ကျွန်တော်တို့ လျှို့ဝှက်စွာလုပ်ဆောင်သော ကိစ္စရပ်များကိုသူတို့အားလုံးသိနေကြသည်။ သူတို့၏ ရုပ်ရည်သည် ဗမာနှင့်တူသည်။ အထက်အညာဒေသရှိ မူစလင်များမှာ သာ၍ပင် ဗမာများနှင့် ခွဲခြားရန် ခက်ခဲသည်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ သူတို့အတွင်း မြန်မာမျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ပေါ်ထွန်းနေရန်သာဖြစ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံသမိုင်းတလျှောက် ဗျက်ဝိ ဗျတ္တ မှ အစ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်အဆုံး သူတို့သည် ဗမာလူမျိုးများနှင့် အတူ သွေးစည်း ညီညွတ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံကိုသစ္စာဖောက်သည်ဟူသော အစဉ်အလာဆိုးသည် သူတို့တွင် မရှိခဲ့ကြောင်း ရိုးသားစွာ ၀န်ခံရပါမည်။ စွန့်စားခြင်းကို ၀ါသနာပါ၍ ဖိနှိပ်မှုကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ရသည်။ သူတို့တွင် မျိုးချစ်စိတ်မရှိလျှင် သူတို့သည် တရုတ်များကဲ့သို့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးမှ တသီးတခြားနေမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ မူစလင်များဖြစ်လာသည်နည်းတူ မူစလင်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းသူများလည်း အများအပြားရှိသည်။ ထင်ရှားသောသူများကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြရလျှင် သခင်ဘသောင်း၊ ဒဂုဏ်ပဦးဘတင်၊ ရွှေဘ၊ ချိုပြုံး၊ မေ၀င်းမောင်၊ ကျော်သူ စသည်ဖြင့် ရုပ်ရှင်လောကမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စစ်ဖက်နယ်ဖက် အနုပညာလောကမှ ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ် အများအပြား ရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့က လူမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်သောက ရှိသကဲ့သို့ မူစလင်များသည်လည်း ဤကိစ္စကို သောက ထားရှိကြသည်ပင်။
ဗမာအမျိုးသမီးကို ယူလျှင် ဘယ်၍ ဘယ်မျှ ပေးမည်ဟူသော ရေးသားဖော်ပြချက်သည် ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မူစလင်တို့၏ အခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ပြီးမှ မှတ်ချက်ချသင့်ပါသည်။ မူစလင်များသည် ဗမာလူမျိုးနည်းတူ ချမ်းသာသူများရှိသလို၊ လူလတ်တန်းစားများလည်းရှိသည်။ ဆင်းရဲသားများ၊ ဖွတ်တတ်အောင် မွဲနေသူများလည်းရှိသည်။ ခါးပိုက်နှိုက်၊ ခိုး၊ ဆိုး၊ လုယက်၊ ၁၀၉-၁၁၀၊ ပြည့်တန်ဆာမများ၊ ပြည့်တန်ဆာခေါင်းများသည်လည်း အများအပြားရှိသည်။ အကယ်၍ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ အထောက်အပံ့များ ရရှိမည်ဆိုလျှင် မူစလင်တို့၏ အခြေအနေသည် တရုပ်လူမျိုး သာသာ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ မြို့သစ်များနေ ဆင်းရဲဆုတ်ပြတ်နေသော ကုလားမူစလင်များက ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမပေါ်တွင် ပိုက်ဆံလိုက်တောင်းနေပုံမြင်ကွင်းကပင်လျှင် ယင်းသူတို့၏ အခြေအနေမှန်ကို သိနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ယင်းသို့သော ၀ါဒဖြန့်ချီချက်များသည် မုန်းတီးရေးကို ဦးတည်သည်ဖြစ်၍ ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်သူအဖို့ လက်ခံနိုင်သော အခြေအနေပင်မရှိနိုင်ပါ။
"မျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ရ" စာတမ်းကြောင့် ကြီးမားသော ပဋိပက္ခနှင့် အကြပ်အတည်းကိုသာ တွေ့နိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မူစလင်များကို စောင့်ကြပ်သော အရှေ့ဖျားဒေသ မူစလင်အသင်းရှိနေသည်။ ကမ္ဘာ့မူစလင်အဖွဲ့ကို ဆော်ဒီရှိ ဂျစ်ဒါမြို့တွင် ရုံးချုပ် ထားရှိသည်။ ယင်းအဖွဲ့သည် အဖွဲ့အားလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ မူစလင်အရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတို့က တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများသည် တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သလို၊ အကြမ်းဖက်သမား များကို သင်တန်းပေးသောအဖွဲ့၊ လက်နက်ပေးသောအဖွဲ့ စသည်ဖြင့် တရားမ၀င် ဖွဲ့ထားသော အဖွဲ့များလည်းရှိသည်။ အရေးကြုံက သူတို့က လက်မနှေးကြပေ။ ယင်းအဖွဲ့များကို အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အီရတ်နှင့် လစ်ဗျားတို့က အထူးအားပေးသည်။ များမကြာခင်က မြန်မာနိုင်ငံရှိမူစလင်များ လက်နက်စွဲကိုင်ကာ သူတို့၏ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်းကို မသုံးစွဲသည့်အတွက် အာဖဂါန်ရှိ အိုစမာ က "မြန်မာမူစလင်တို့သည် သူရဲဘောကြောင်လွန်းသည်" ဟု ဗျူးခန်းတွင် ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မူစလင်များနှင့် သူတို့၏ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည် အကြမ်းဖက်လမ်းစဉ်ကို ရှုံ့ချသူများဖြစ်ပုံရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေတ်အသီးသီးတွင်ရှိခဲ့သော သောင်းကျန်းသူတို့ကြောင့် တိုင်းပြည်ဆုတ်ယုတ်လာပုံကို မြန်မာမူစလင်တို့က သိသည်။
ယခု "မျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ရ" လမ်းကြောင်းသည် မလွဲမသွေ ယင်းအနိဌာရုံဖက်သို့ တွန်းပို့နေသည်။ ယုတ်စွအဆုံး မူစလင်တို့သည် ပဋိပက္ခကို ရှောင်ရင်းနှင့် ဒေသတစ်ခုဝယ် စုမိသွားကြလိမ့်မည်။ ယင်းဒေသသည် အနာဂါတ်၏ ဘော့စနီးယားနှင့် ကိုဆိုဗို ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဤလမ်းကြောင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားကြရပါမည်။ သို့မှသာလျှင် နိုင်ငံတော်ကြီး သည် တည်တံ့ခိုင်မြဲမည်ဖြစ်သည်။ ပြင်ပမှသွေးထိုးပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သူတို့နိုင်ငံတွင် မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော သွေးချောင်းစီးမှုများကို မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် ပေါ်ပေါက်စေလိုကြသည်။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အိန္ဒိယမှလာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို တရား ဓမ္မပို့ချသယောင်၊ကမ္မဌာန်းတရားပို့ချသယောင် အတိတ်၏ ရန်ငြိုးများကို ကလဲ့စားချေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်္ကန်းဝတ်ဘုရားသားတော်များ ပင် ဤကိစ္စတွင်လက်ဝင်နေကြခြင်းက မေတ္တာအရင်းခံ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကို ပိုပြီး ရုပ်ဆိုးစေပါသည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ အစဦးကာလတွင် သိန်းပေါင်းများစွာသော ဟိန္ဒူကုလားများသည် သူတို့နိုင်ငံကို ပြန်ခဲ့ကြသည်။ စက်ရုံများကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းစဉ်က ထိုတရားဓမ္မပို့ချသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၏ စက်ရုံသည်လည်း ပြည်သူပိုင်စာရင်းဝင်ဖြစ်သည်ကို သတိချပ်စေလိုပါသည်။ သူ၏ တပည့်များဖြစ်သော ပါရဂူနှင့် နှစ်ဖက်လှတို့မှာ ဆရာကြီး၏ ပေးကမ်းမှုပေါ်မူတည်၍ သံယောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗာရာဏသီ ဟိန္ဒူ တက္ကသိုလ်မှ ဆင်းလာသူလည်းပါပြီး ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို သူတို့၏ ဘုရားဝင်စားသူ အဖြစ်လောက်သာ လက်ခံခြင်း သာလျှင် ပြုသည်ကိုလည်း သတိချပ်ပါ။
ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်သည်ကား နိုင်ငံတော်အစိုးရက ပံ့ပိုးနေသော ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓသာသသနာ ထွန်းကားစဉ်က ဗုဒ္ဓသာသနာနယ်ပယ်သည် အီဂျစ်ပြည်မှ ဂျပန်နိုင်ငံအထိ ရှိခဲ့သည်။ အီဂျစ်ပြည်၊ ဆီးရီးယား၊ ပါလက်စတိုင်းတို့တွင် ခရစ်ယံဝင်ရောက်ခဲ့၍ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပျောက်ခဲ့ရသည်။ တစ်ဖန် ခရစ် သက္ကရာဇ် ၆ ရာစုနှစ်တွင် မိုဟာမက် ပေါ်လာ၍ အီစလံသည် ယင်းဒေသ တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ရသည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၅ ရာစုတွင် အီစလံသည် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအားဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ မလေးကျွန်းဆွယ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤတွင် ဗုဒ္ဓနယ်ပယ်သည် ကျဉ်းမြောင်းသည်ထက် ကျဉ်းမြောင်းလာခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်တွင် မြောက်ဖက်မှနေ၍ အီစလံ ၀င်ရောက်လာရာ၊ တရုပ်ဧကရာဇ်တို့က မြှောက်စားခဲ့၍ ယနေ့ သန်းပေါင်း ၁၅၀ ကျော် မူစလင်များ တရုပ်ပြည်တွင် ရှိနေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာမူစလင်များနည်းတူ တရုပ်ပြည်တွင် "ဟွီ" ဟုခေါ်သည့် တရုပ်မူစလင်များရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်ချင်း ထိနေသော ယူနန်နယ်တွင် ဟွီ များသည် ၃၀% မျှရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် အဓိကအလေးထားပြီး လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်မှာ ပိဋကတ်တော်ကို ကျွန်တော်တို့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော နယ်ပယ်များ၏ ဘာသာစကားစာပေဖြင့် ပြန်ဆိုရေးပင်ဖြစ်သည်။ အာရဗီစာပေ၊ ပါရှန်းစာပေ၊ အာဖဂါန်ရှိ ပုရှတိုစာပေ၊ အိုရဒူစာပေ၊ ဘဟာရှာအင်ဒိုနီဆီယာ သို့ ပြန်ဆိုရပါမည်။ မူစလင်တို့တွင် ဘုန်းကြီးမရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော မိုလ၀ီဘုန်းကြီးများကို အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံများတွင်သာ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အခြားမူစလင်နိုင်ငံတွင် မိုလ၀ီဟူသော ဝေါဟာရကို ကြားလျှင် ရယ်ကြ ဟားကြသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ မူစလင်တို့သည် ဘာသာရေးကိစ္စကို ကျွမ်းကျင်သူများကို "အူစတပ်" ဆရာ ဟုသာ ခေါ်သည်။ မူစလင်တို့သည် အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ အာဇဟာ ဘာသာရေးတက္ကသိုလ်၊ မလေးရှားတွင် နိုင်ငံတကာ အီစလံ တက္ကသိုလ် စသည်ဖြင့် တက္ကသိုလ်များသို့ သွားရောက်ကာ ဘာသာရေးပညာများဆည်းပူးကြသည်။ အမြင့်ဆုံးပါရဂူဘွဲ့အထိပေးသည်။ ဘာသာရပ်အနေဖြင့် ကိုရမ်ကျမ်းကို အနုစိတ်လေ့လာခြင်း၊ မိုဟာမက်သြ၀ါကျမ်းများ၊ ဂိုဏ်းဓမ္မသတ်များ၊ သမိုင်းဘာသာများ၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး စသည့် ဘာသာရပ်အများအပြားကို သင်ယူကြရသည်။ ကိုရမ်ကျမ်းကို အာရဗ်စကားမှ ကမ္ဘာ့ဘာသာ ၁၅၀ ကျော်နှင့် ပြန်ဆိုပြီးဖြစ်သည်။ ဥရောပတိုက်ရှိ တက္ကသိုလ်များ၏ အရှေ့တိုင်းဌာနမှာလည်း အီစလံနှင့်ပတ်သက်ပြီး စာတန်းတင်၍ ပါရဂူယူ၍ ရသည်။ ထူးဆန်းသည်ကား မူစလင်တို့ဘာသာကို မော်စကိုနှင့် ပီကင်းတက္ကသိုလ်များတွင် မဟာဌာနအထိ ဖွင့်လှစ်ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့က ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ကို ဘုန်းကြီးမရှိ၍ ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့က ထမ်းဆောင်ကြသည်။ ရှင်ဥက္ကဌ၏ နည်းလမ်းသည် မူစလင်တို့နှင့် နီးစပ်သည်။ ဘာသာရေးကိစ္စကို ဘုန်းကြီးတို့ က ချုပ်ကိုင်ခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ လူဝတ်ကြောင်များက အတတ်နိုင်ဆုံး မျှယူရပါမည်။ ဘုန်းကြီးများ၊ ဆရာတော်ကြီးများ၏ ဓမ္မတာဝန်ကို ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ တာဝန်ဝေခွဲယူရ ပါမည်။ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ရှင်ဗုဒ္ဓ၏ သြ၀ါဒတော်အတိုင်း မေတ္တာတော်ဖြင့် အခြားသူများအပေါ် အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားရပါမည်။
ဗုဒ္ဓ၏ မေတ္တာဝါဒကို စွန့်ပယ်ပြီး ဗုဒ္ဓမကျလမ်းစဉ်များဖြင့် စခန်းသွားနေကြမည်ဆိုပါမူ အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ရရုံတင်မက "ဘုံပျောက်မှာပင် စိုးရိပ်ဝင်" စရာ ရှိနေပါသည်။
ဤနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓ၏ မေတ္တာအောက်တွင် ရှိနေပေရာ ဗြဟ္မစိုရ် တရားလွှမ်းခြုံဝတ်ကာ ကမ္ဘာအေးစေရေးကိုသာ ရှေ့ရှုသင့်ပါ ကြောင်း။
ဆက်သွယ်ရန် – အငြိမ်းစားသံအမတ်ကြီးတစ်ဦး
အသိထူးဓမ္မဒါန၊ စာတိုက်သေတ္တာအမှတ် – ၅၇၅၊ ရန်ကုန်မြို့။
( ဤစာတမ်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အဆင့်ဆင့်ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး လျှို့ဝှက်စွာ ဖြန့်ချိခြင်းဖြင့် သာသနာပြု ကုသိုလ်ယူကြပါ
Posted: 16 Apr 2013 03:45 AM PDT
How does he do that? He picks Perkasa vice-president Zulkifli Noordin as BN candidate to face off with Khalid Samad of PAS in the Shah Alam parliamentary seat. Zulkifli, who is Kulim Bandar Baru MP, was sacked by PKR and becameaBN-friendly Independent. His name was announced by BN head Najib Abdul Razak, who is also Selangor BN chief. Perkasa is BN and BN is Perkasa. To those who doubted this before, let this bealesson for them to be silly as to trust Najib and his so called 1Malaysia. He is an untouchable.
This is the Vidoe clip all Indians should watch, Zulkifli Noordin spitting on the Hindu Faith
I wonder what ever happened to all the hot air spewed forth by Vell Pari, son of Some Value, oops Samy Vellu. Yesterday, Vell Paari revealed that he had sentaletter to party president G Palanivel asking for the government to initiate action against Ridhuan Tee Abdullah and Perkasa chief Ibrahim Ali for making comments insulting Indians in the country.
Among others Vell Paari wanted Palanivel to bring the matter up to the cabinet so that action can be taken against the two. If Palanivel fails, then Vell Paari, threatened, that he would ask the community to vote for the opposition at the next general election. He also challenged Palanivel to sack him for the open letter. Well Palanivel does not have the cojones to do anything, as he is deep in bed with UMNO. The Indians with Leaders like this will continue suffering, if they do not open their eyes.
Zulkifli Noordin is supposedly an ultra conservative. Which actually means that he isaracist andabigoted arsehole.
Meantime, Najib continues pissing on the Indians. The decision to field Zulkifli Noordin is particularly hurtful to the Indian community, whom he had insulted and whose religion he had publicly mocked. Think cow head.
Onafurther note BN has handed over the Shah Alam parliamentary seat onaplatter to Khalid Samad of PAS, he isashoo in. For Zulkifli Noordin,ascumbag and slimeball that is the end of his political career. So all you Indians out there who are favoring the MIC, you are voting in PERKASA, which UMNO outsources for extremism , think again. Think Interlok.
Posted: 16 Apr 2013 03:39 AM PDT
Yes it will. But hold your horses for that depends on which side of the fence you are camping yeah. Here is the perspective: It truly amazes anyone where is BN getting all the money to spend and seemingly donate. From free blue helmets to tons of rice bags to its now widely sniggered RM1.39 per day relief allowance; from sponsored shows to mega-dinners and out-of-the-blue mega-proportions of cash donations.
And of course do not miss out the inventory on the overwhelming draping of streets and alleyways with the blue party-flags of reasonable quality material; the mega-size billboards; the air-time; the overdose of news and advertisements in print. My, my, where is all this money coming from? Who is paying for these?
Indeed there must some great Santa out there helping BN. And if BN says it is not using the rakyat's money, then indeed we have some great philanthropist out there not knowing how to reach and relief the suffering human souls across mother-earth. Any accountant out there who can safely tabulate the millions if not trillions that have been spent to secureapolitical party coalition's political strategy?
And please do not forget to factor in the time cost too as well as the labor cost because each timeaVVIP appears, there is the police, the outriders, the vehicles, the protocol officers and bodyguards, and what have you to be paid too mate. Now the question that begs for that illusive answer is: will BN sweep into victory with overwhelming votes, come GE-13?
The BN campers and drivers will say 'Yes' and add in quick succession add, 'we know best lah. We have been in this business for over five decades and practiced very hard all these past thirty years, you know'. Meanwhile, the rakyat keep turning up in droves for PR events. The most recent was over the weekend where all the roads to AU/Keramat was chocked with traffic as people converged by the thousands to meet, greet and hear out Anwar Ibrahim.
They come even when it is raining dogs and cats and know that they have to squat on soggy fields and muddy tracks just to hear out and show interest in what the opposition PR has to offer – and knowing too well too that there is no Santa there to give them air sirap, teh panas and nasi briyaani. They not only give resounding responses to the speeches but they also go back homealittle empty in their wallets as they would have dropped some cash into the begging-bags passed around to fund the political needs of the coalition. So will BN's money-train deliver the results? Yes, it will. And the results are:
If BN wins, it means that all the freebies work well with voters. They are happy withafishaday. But if PR bags the Putrajaya, it simply means that Malaysians are not so easily swayed by carrots but have remained resolved to buildanation that returns to society what rightly belongs to humanity. That is, Malaysians have arrived atanew height of believing in learning to fish rather than live withafree-fish-a-day. In summary, the GE-13 therefore will reveal whether Malaysians are suckers for aid or die-hard for determined efforts. Therein is the the end-result of the maoney-train of BN.
Right or wrong? Or you don't care? Via email
Posted: 16 Apr 2013 03:33 AM PDT
Police tooka20-year-old Saudi national into custody near the scene of yesterday's horrific Boston Marathon bomb attack, law-enforcement sources told The Post. The potential suspect was questioned by the FBI and local police yesterday at Boston's Brigham and Women's Hospital, where he was under heavy guard while being treated for shrapnel injuries to his leg sustained in the blast. In late afternoon,alarge group of federal and state law enforcement agents raided an apartment inabuilding in the Saudi man's hometown of Revere, Mass.
FBI agents could be seen through one window. It was not clear what, if anything, they found. But Revere fire officials said they were called out to support bomb-squad officers as part of an investigation ofa"person of interest" in the marathon attack. At the hospital, investigators seized the man's clothes to examine whether they held any evidence that he was behind the attack. The law-enforcement sources also told The Post that the man was not free to leave the medical center. He had suffered shrapnel wounds to the back ofaleg but was not likely to die,asource said. As of last night, investigators had not yet directly asked the man whether he had set off the bombs. But they had asked him general questions, such as what he was doing in the area.
The potential suspect told police he had dinner Sunday night near Boston's Prudential Center, about halfamile from the blast site, the sources said. He also said that he went to the Copley Square area yesterday to witness the finish of the race. The sources said that, after the man was grabbed by police, he smelled of gunpowder and declared, "I thought there would beasecond bomb." He also asked: "Did anyone die?"
Officials showed up at the Revere apartment at about 5:30 p.m. in unmarked vehicles,aresident of the building said. It's onastreet where the man had lived, law-enforcement sources told The Post. About an hour later, more vehicles, carrying agents of the FBI, Homeland Security and ATF also descended on the site, along with firefighters andabomb squad. They searched an apartment on the fifth floor. By midnight, most of the authorities had left the complex, which sits onapiece of ocean-front property in the seaside city.
Investigators were looking for anything that might have been used set to off the devices, includingaremote control. According toareport by CBS News, the man was initially tackled byabystander while running from the scene of the explosions. The bystander told police he grabbed the Saudi because he thought he was acting suspiciously. New York Post
Posted: 16 Apr 2013 02:56 AM PDT
Recently, Britain's Got Talent started again and for the second time, Arisxandra Libantino - an 11 year old Filipina residing in UK took to the stage performing the Jennifer Hudson song 'One Night Only'. If you just listen to her voice without watching the video, you would probably think that mature and powerful voice is that of an adult, not an 11 year old sweet girl.
"Having an 11-year-old girl sing an adult song like this is simply sexualising children. It's incredibly damaging because this show is marketed at primary school children.
"ITV appear to have completely ignored the Ofcom guidelines – I don't even know why they put the guidelines out. This kind of thing is not what families want to see.
"We are sleepwalking intoasituation where pornography is the norm." MORE HERE.
I do agree that it wasabad choice for suchayoung kid but let's forget about the morality of the lyrics for the moment...just spareafew minutes to watch the UK's latest singing sensation Arisxandra Libantino..
Korean pop group Girls' Generation's latest Japanese music video (short version) for Beep Beep,asong from the Girls & Peace album released in November 2012. Sort ofafiller project until their next new Japanese single in mid 2013…
Girls' Generation series – Previous: Jessica W Magazine
Girls' Generation Beep Beep music video from YeinJee's Asian Journal
Posted: 16 Apr 2013 04:04 AM PDT
"(Mereka) rela datang berjumpa saya, menghubungi saya dan pergi ke rumah Datuk Haron serta sudah bertemu Datuk Nik Aziz kira-kira enam bulan lalu.
"Tidak mungkin orang macam ni tidak serius. Sudah pasti mereka telus.
"Kita tidak mahu ada mana-mana pihak menuduh mereka ada kepentingan atau sebagai calon. Mereka hadir untuk membantu berkempen," katanya.
"Benar, tapi tunggu sahaja pengumuman rasmi. Yang pasti, kedua-dua Tan Sri ini akan memberi impak besar dalam PRU13.
"Mereka mempunyai pengaruh sangat kuat dan kehadiran mereka pasti memberi perubahan besar," katanya.
Ditanya mengenai identiti kedua-dua Tan Sri ini, Salahuddin sekadar berkata: "Seorang daripada mereka adalah bekas pegawai kerajaan yang mempunyai kaitan dengan Parlimen Malaysia. Orang ini menduduki hierarki tertinggi dalam pentadbiran Parlimen.
"Seorang lagi ialah bekas menteri Selangor. Bagaimanapun, beliau enggan mengesahkan identitinya." -SH
In DEMOCRACY, the majority rules. But the majority must protect the minorities rights. Minorities also must respect the majority. Mutual respect is more important than justamutual tolerances. If the Majority don't care about minority, democracy would deteriorate into MOBOCRACY. (e.g. Mobs rule in Rule of Mob in Taungope, Rakhine state and Meikhtila.)
Phyo Mg Mg Win Yes, I know Sir I also respect minority.So I protect minority rights in Myanmar, Sir
Ko Ko Gyi I also respected the monks and LOVED my non-Muslim friends. I opened my clinic near2Masoeyein Monastries, Mya Taung, 3rd. Shwe Inpin in Pae Poke Tan Mdy. Monks and their relatives consists of more than 50% patients. Every day 99% of my pts are Buddhists. Monks always took care of me and clinic. Even after the theft at night, monks investigate and arrested the thieves. If anyone fight or drunkard making noise, monks would just pulled away not to do any disturbance near my clinic. I even dream about my Buddhist friends and Dr Min Nyan, my best friend. He isaRakhine Buddhist because we studied together and worked together.
Phyo Mg Mg Win Yes,Sir I know about all of your situation.I already respect to you but our burma is not saturated in so many sector because of dictator government.
Posted: 16 Apr 2013 12:04 AM PDT
Spotify works on all your devices. Whether you're working out, partying or relaxing, the right music is always at your fingertips. Click the button below to get started. Happy listening!
I don't think Lim Kit Siang is afraid of Umno but the fact that his opponent Gelang Patah parliamentary seat is the outgoing Johor Mentri Besar Ghani Othman, makes him 'regrets it' as he was hopingashowdown withaMCA candidate.
His intention to wipe off Johor MCA now hinges on his performance. If he wins against heavyweight Ghani, he will be seen asamentor to DAP followers and members; but if he loses, that will spell disaster as it marks the end of his political career.
He was disappointed that both former PM Tun Dr Mahathir Mohamad and MCA president Chua Soi Lek did not entertain his 'school-like' challenge to take him on in Gelang Patah. That explains why he lambasted MCA for 'running away' from Gelang Patah.
And he was expecting MCA would field its candidate because he was confidence of winning.
However, Barisan Nasional is not Pakatan Rakyat. BN allocates the seats by consensus while Pakatan's components namely DAP, PKR and PAS scramble for it, putting individual interest above the coalition.
Lim may feel that he has been played out by BN... but yes, I believe MCA and Umno agreed to pin him down.
The DAP stalwart is now calculating the risk he has to take should he fails to win but what choice has he got except to accept Ghani, the most successful Johor mentri besar to date. Any miscalculation on Ghani's strength will see Lim end up in the ditch.
Pakatan ran in Gelang Patah in the past two general elections, but lost both times to Johor Wanita MCA chief Tan Ah Eng.
Tan kept the seat in Election 2008 withamajority of 8,851 votes,asmaller majority than the overwhelming 31,666-vote majority in 2004.
If 50 per cent of the Chinese votes, 70 per cent Malays and 70 per cent Indians go for BN, Lim will have to bid farewell to politics... forever!
A still shot from Luc Besson's 2011 film The Lady.
Luc Besson's 2011 film The Lady isaheartfelt tribute to Aung San Suu Kyi,ahumble stay-at-home mother who returned to Burma only to become caught up in political turmoil. Her relationship with her husband and their ultimate sacrifice for the people of Burma plays out in performances by Michelle Yeoh and David Thewlis, which touched hearts of audiences all over the world — not least in Burma, where love for "the Lady" or "Auntie Suu" was unshakeable.
Onceabeacon of hope and the symbol ofanation's movement towards freedom, dignity and democracy, the narrative around Aung San Suu Kyi appears to be changing. People are no longer blinded by the light; now that Aung San Suu Kyi has gone from beingamartyr under house arrest toapolitician withaseat in the country's Parliament, things are looking very different indeed.
Last month she was confronted by farmers from villages in central Burma protesting against the opening ofacopper mine in their area. She also shocked many by expressing her "fondness" for the army; while she said it was because she still thought of them as "her father's army," to most people in Burma the army cannot be separated from the oppressive military junta that has ruled them for decades.
The fighting in Meiktila reveals to the worldadisturbing continuation of anti-Muslim sentiment within Burma, similar to that seen in Rakhine State, where Muslim Rohingyas are still being persecuted and denied humanitarian aid. Reports speak ofa"969 Campaign" against Muslims led by revered Buddhist monks, who are distributing anti-Muslim materials and encouraging boycotts of Muslim businesses. A video has surfaced on Facebook showing the well-known Buddhist monk Wirathu giving an incendiary anti-Muslim speech, encouraging Burmese citizens to act in the name of "nationalism."
Throughout all this strife Aung San Suu Kyi has said little beyond urging the Mandalay police chief to "act in accordance to the law." For many Burmese watching the violence unfold, it is simply not enough.
Shine,aBurmese Muslim, says he is most disappointed with her hesitance in takingastrong stand against these kinds of riots and violent clashes in the country. "She always used to talk about the 'rule of law,' … but when she got that position to be head of the Rule of Law Committee, what is she doing? What is her action?" he asks.
Her failure to speak out strongly against the violence in Meiktila is made even more discomforting after the Euro-Burma Office circulated an email alleging that members of her party, the National League for Democracy, have been involved in "anti-Muslim disturbances." If these claims are true, it would be even more unacceptable for Aung San Suu Kyi not to takeastrong stand against the perpetuation of violence against Muslims in Burma.
Aung San Suu Kyi is no longer justasymbol, locked away under house arrest. Now that she is released and in Parliament, she seems to be playing politics like everyone else. It's an unwelcome revelation for many Burmese who have seen her asastaunch defender of human rights and dignity.
"Asaglobal symbol of democracy and human rights defender, she should be clear with her moral standpoint and speaking out against human rights abuses happening across the country," Shin Thant,aBurmese student, said. "Morality should rule over political gain or loss."
Opinion is divided as to Aung San Suu Kyi's current popularity in Burma. Shine states with confidence that she has "already lost more that half of her supporters in the country," but Shin Thant is not so sure: "Many people still have hope that she could do something to develop the country."
To be fair, one cannot lay all the blame at Aung San Suu Kyi's door. One woman all by herself was never going to be able to bring freedom and democracy toacountry in the grip ofamilitary dictatorship, and to expect her to do so would be unreasonable. Much of the current disappointment has also come from the way that she has — not by her own doing — become larger-than-life in the public consciousness after years of house arrest. In many ways, the Burmese people have seen her asamartyr of their cause, but now the martyr has re-entered public space and shown herself to be all too mortal.
"The category 'martyr' and the category 'politician' shouldn't be inasame person," said Phyo Win Latt,aboard member of the Institute of Alternative Histories and Popular Culture, an organization that promotes the study of local histories, arts and culture in Burma and Southeast Asia. "Democracy needsaculture where it can thrive. It doesn't needagoddess or an angel of democracy. Too much energy and attention is being paid to Aung San Suu Kyi without nurturing liberal and democratic values."
Posted: 16 Apr 2013 12:10 AM PDT
Malaysian voters' two 'real' options on May 5th
Updated 10 April 2013, 22:04 AEST
After overayear's wait, Malaysia's picked May 5th foranational election.
Malaysian voters' two 'real' options on May 5th (Credit: ABC)
The Election Commission says the two-week official campaign will begin on April 20th, after the
Posted: 15 Apr 2013 11:00 PM PDT
Let me bring you up to date, but before you read on, please sit down OK? Don't read any further unless you're sitting down.
I am getting along pretty well now. The skull fracture and the concussion I got from jumping out of the window of my dormitory when it caught on fire several months ago, are pretty much healed now. I only spent two weeks in the hospital! Mom always said the girls in our family heal fast.
In fact, I can almost see normally again and I only get headaches three timesaday now.
Fortunately, the fire in the dormitory and my jump were witnessed byagas station attendant who immediately called 911. He's so sweet. He even visited me in the hospital, and since I had nowhere to live because of the burnt-out dorm, he was kind enough to invite me to share his apartment with him. It's reallyabasement room, but it's kind of cute.
He really isagood person withakind heart. We have fallen deeply in love and are planning to get married. We haven't set the exact date yet, but I'm sure that it will be before I start to show. That's right, Mom and Dad, I'm pregnant! I know how much you are looking forward to being grandparents, and I know that you will give that baby the same love, devotion and tender care you gave me when I was growing up.
We would get married now, but we both failed our premarital blood tests because of some minor infection. He told me about it beforehand, but dumb me, I carelessly caught it anyway. Not to worry though, the doctor said my daily penicillin injections should clear it up by next month.
I know you will welcome him into our family with open arms. He is kind, and although not well educated, he is ambitious -- just like Dad!
Also, he is ofadifferent race and religion than ours, but I know, after all your years of teaching me tolerance, that you won't mind the fact that he is somewhat darker than we are. I'm sure you will love him as I do. His family background is good too! I am told that his father is an important gun bearer in his native African village. That's an important government position where he comes from. Well, I guess that's all! Now you know why I wanted you to sit down when you read this letter.
Now that I've brought you up to date, I just wanted to let you know there was no dormitory fire, I didn't sufferaconcussion oraskull fracture, I wasn't in the hospital, I'm not pregnant, I'm not engaged, I don't have syphilis and there is no boyfriend of another race or religion in my life; however, I DID vote for Gov. Bush, and I just wanted you both to see this in its proper perspective.
Posted: 15 Apr 2013 11:02 PM PDT